Tag Archive for "उजुरी" - कांग्रेस अनुशासन समितिमा एक हजार दुई सय उजुरी !
कांग्रेस अनुशासन समितिमा एक हजार दुई सय उजुरी !
काठमाडौं । पार्टी अनुशासनविपरीत काम गरेको भन्दै कांग्रेस अनुशासन समितिमा एक हजार दुई सय उजुरी परेका छन्। निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारलाई सहयोग नगरेको, विपक्षी दलको उम्मेदवारलाई जिताउन भूमिका खेलेको, टिकटमा मनोमानी भएकोजस्ता विषयमा बढी गुनासो परेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। स्याङ्जामा गोपालमान श्रेष्ठकै कारण निर्वाचन हारिएको भन्दै पुराना नेता भोजराज अर्यालले उजुरी दर्ता गराएका छ... थप पढ्नुहोस्
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराको सुनुवाइ आइतबार हुने
काठमाडौं। संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई यही पुस १५ गते 'आइतबार' संसदीय सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सुनुवाइका लागि आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले शुक्रबार उजुरीकर्तासँग छलफल ग¥यो । उजुरीकर्तासँग शुक्रबार छलफल गरेपछि समितिले जबरालाई आइबार सुनुवाइका लागि बोलाएको हो । आइतबार सम... थप पढ्नुहोस्
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस चोलेन्द्रशम्शेरविरुद्ध आजदेखि उजुरी दिन आह्वान
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरेको छ । समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले जवराविरुद्ध उजुरी दिन आज सोमबारबाट आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो । गत बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले जबरालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णयसहित सुनुवाइ गर्न समितिलाई पत्राचार गरेको थियो । ... थप पढ्नुहोस्
मापदण्डअनुसार उद्योग नचल्दा आयोगमा उजुरी
ललितपुर । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा वातावरण प्रदूषणसँग सम्बन्धी उजुरी आउन थालेको छ । वायु प्रदूषण, नदीनाला प्रदूषण, खानेपानी प्रदूषणलगायतका वातावरणीय समस्याका उजुरी आउन थालेको आयुक्त सुदीप पाठकले बताए । कतिपय औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगले अपनाउनुपर्ने सामान्य सावधानी अपनाएका छैनन् । बस्तीका बीचमा सञ्चालन भएका उद्योगले त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्न असहज भएको भन्दै उजुरी आइरहेको हो । ... थप पढ्नुहोस्
काउन्सिलका उजुरीमा मेलमिलाप
काठमाडौं । यही कात्तिक ८ गते प्रेस काउन्सिलको मध्यस्थतामा उजुरीकर्ता ओशो तपोवन र नेपाल आज डटकमका प्रतिनिधिबीच छलफल भई मेलमिलाप भएको छ । मानहानी भयो भन्दै उजुरीकर्ताले पठाएको खण्डन जस्ताको तस्तै छाप्ने र उजुरीकर्ताको भनाइ राख्न पर्याप्त समय दिने विषयमा दुई पक्षबीच सहमति भएपछि मेलमिलाप भएको हो । त्यसैगरी यही वैशाख १४ गते पूरा समाचार डटकमबाट नेपाल टेलिकमका विषयमा सम्प्रेषित सामग्री र सो माथि नेपाल ... थप पढ्नुहोस्
बढी भाडा लिने विरुद्ध तुरुन्त उजुरी गर्न सरकारको आग्रह
कलंकीमा रहेका सबै काउण्टर हटाउने तयारी काठमाडौं । दशैंमा घर जादै हुनुहुनछ घर जाँदा गाडीले बढी भाडा लिए तुरुन्त खबर गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ । काठमाडौंबाट चाडपर्व मनाउन घर जाने क्रममा केही गाडीले यात्रुलाई ठगीरहेको पाइएकाले सरकारले ठगी गर्नेविरुद्ध तुरुन्त नजिकैको प्रहरी वा ट्राफिक प्रहरी र यात्रु सहायता कक्षमा उजुरी गर्न यात्रुलाई आग्रह गरेको हो । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद... थप पढ्नुहोस्
न्यायिक समितिमा उजुरीको लर्को
काठमाडौं । मुलुकभरका ६ बटा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी आउने क्रम उच्च देखिएको छ । बिगतमा जिल्ला तथा क्षेत्र तहका अदालतमा आउने ती उजुरीहरु अहिले स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिमा आउन थालेका छन् । ६ वटा महानगरपालिकामा अहिलेसम्म ६ सय ४५ थान उजुरीहरु न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । ती मध्ये दुई सय ९ थान उजुरीहरुको मात्र निर्णय प्रकृया सम्पन्न भएका छन । म्हानगरपालिका मध्ये सवैभन्दा बढि काठ... थप पढ्नुहोस्
धनगढीका मेयरलाई कारवाहीको माग गर्दै प्रशासन कार्यालयमा उजुरी
कैलाली । धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृप बहादुर वडलाई पक्राउ गरिनुपर्ने भन्दै प्रदेश ७ का २० जना सांसदले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संयुक्त उजुरी दिएका छन् । प्रदेश ७ को राजधानी ‘गोदावरी’ बनाउन लागिएको भन्दै बुधवार भएको प्रदर्शनमा वडले धनगढीबाट राजधानी सारिए संसद भवनमा आगो लगाउने, सांसदले २४ घण्टाभित्र धनगढी छोड्नुपर्ने लगायतका विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। सांसदहरुले मेयरका अभिव्यक्ति... थप पढ्नुहोस्
अख्तियारको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई, सबैभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रका उजुरी
२८ मंसिर, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को सताइसौँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज आयोजित विशेष समारोहमा आयोगका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् । आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न रणनीति अवलम्बन गरेर सदा... थप पढ्नुहोस्